Ga onye gbanwere mmekọahụ heaven? | Apg29
Mgbe m chere echiche banyere nke a na ụfọdụ ịhọrọ ịgbanwe mmekọahụ site usiakidem, adịghị m eche na e ihe ọ bụla banyere ihe ndị dị Bible. Ya mere, m na-kụjara mgbe m hụrụ nke a amaokwu Ndozigharị Bible translation:
Na ndị natara na testicles gburu ma ọ bụ N'ịdị bipu , agaghi-abata n'ọgbakọ Jehova. (5 Gen. 23: 1)
Fọrọ nke nta a mmekọahụ mgbanwe na ime ihe ike na-abịa Bible. Na Old Testament nwere ya mere nwoke ga-abịa na chọọchị na n'ihi ihe ụfọdụ mere ha testicles gburu, ma ọ bụ nke ya amụ, e kewapụrụ.
Ugbu a, anyị kwesịrị ịghọta ihe ole na ole. Amaokwu anyị dị na-agụ bụ iwu Moses na Old Testament. Na ntaramahụhụ na iwu nyere Jizọs weere on onwe ya mgbe ọ nwụrụ n'elu obe nke mere na anyị nwere ike na-azọpụta ma free. Jesus were ikpe na anyị onwe ya ndị kwere na ya ga-ekpe ikpe.
Jizọs bịara bụghị ikpe kama ịzọpụta. Mgbe anyị na-agụ Agba Ochie, anyị aghaghị inwe okwukwe anyị na-ele anya ofu na Jesus, ma ọ bụghị na anyị ga-esi n'ime ihe na-ọzọ na ejedebe na-ezighị ezi.
Na na kwuru, anyị ga-ugbu a chọpụta otú ọ dị ndị na-ama ha testicles gburu na New Testament mgbe Jizọs ekpuchi mmehie ji baa ọnwụ. Nwere ike ha ga-azoputa na e pịrị amụ?
The Bible na-enye azịza ya:
The pịrị amụ nwoke Ọrụ 8
26 Ma mmụọ ozi Jehova sịrị Filip, sị: Bilie, gaa n'ebe ndịda n'okporo ụzọ na-eduga si na Jeruselem Gaza. Ọ bụ akara aka. 27. O we bilie, je. Ma, le, otu ọnaozi Etiopia, a eunuch [a pịrị amụ nwoke] na queen Kandace na Ethiopia, nke o na-etinye gafee akụ ya, bịara Jeruselem ife Chineke, 28 na ọ bụ ugbu a na ụzọ azụ ma nọdụ na ya chariot agụ Aịsaịa onye amụma.
29. Mmụọ sịrị Filip: Laghachi na-anọ na-esote ụgbọala ahụ. 30. Mgbe Philip gbakwuuru ya ma nụ ka ọ na-agụ Aịsaịa onye amụma, sị: Ị na-aghọta ihe ị na-agụ? 31. Ọ zara, sị: Olee otú m pụrụ, ma onye na-eduzi m? Na ọ jụrụ Filip ka ọ rigota ya na ya nọdu. 32. Ma akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke ọ na-agụ bụ nke a:
Dị ka a atụrụ, a kpụtara na gbuo ka nwa atụrụ ogbi n'ihu onye nākpacha ya aji, otú o meghere ya ọnụ. 33. N'ụzọ wedara ya ala ya ikpe a napụrụ, na onye ga-enwe ike ịgwa ọgbọ ya? N'ihi na ndụ ya e ji wepụ ya n'ụwa.
34. eunuch wee malite ikwu okwu na sịrị Filip: m chọrọ ịjụ gị: onye na-onye amụma ekwu nke a banyere? Banyere onwe ya ma ọ bụ onye ọzọ? 35. Mgbe ahụ, Filip meghere ọnụ ya wee malite site na akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusa ozi ọma nke Jesus ya.
36. Ma mgbe ha wee na ụzọ ha, ha wee mmiri. Mgbe ọnaozi ahụ wee sị: Lee, ebe a bụ na mmiri. Gịnị na-egbochi m baptism? 37. we Philip: Ọ bụrụ na ị kwere na obi gị nile, n'ihi ya, nwere ike ime. Ma Ọ zara, si, m kwere na Jizọs Kraịst bụ Ọkpara Chineke.
38. Ma, o nyere iwu ka ụgbọ ịnyịnya ahụ kwụsị, ha abụọ nzọụkwụ n'ime mmiri ahụ, ma Filip ma ọnaozi ahụ, o mere ya baptizim. 39. Mgbe ha wee si n'ime mmiri, Onyenwe ayi wepuru Filip, onozi ahu ahughi kwa ya ọzọ, ma aka iso ụtọ ya njem.
Ọrụ 8: 26-38
Ebe a anyị na-ahụ n'ụzọ doro anya na nzọpụta maka ndị na-spayed ma ọ bụ ndị gbanwere mmekọahụ. All ha nwere ime bụ na-anabata Jesus Christ.
Onozi bụ a neutered nwoke. Mgbe ọ nụrụ ozi ọma, ọ bịara kwere na Jizọs. N'oge na-adịghị, ọ na-azọpụta.
Ọ bụ na ọ dị ka ihe mgbochi?
Mgbe ahụ ọ jụrụ ma ọ bụrụ na e nwere ihe na-egbochi ya ịbụ onye e mere baptizim. Mgbe Philip sị mba ya n'ihi na ọ na neutered, ọ na-apụghị baptizim. O kwuru okwu banyere ihe ọ bụla banyere ihe nke eunuch.
The naanị ihe na etinyere bụ ma ọnaozi kweere na Jizọs bụ Ọkpara Chineke. Mgbe eunuch ama kwuputa onye Jizọs bụ na ọnụ ya aha ya bụ Philip ya.
Mgbe baptism mere abụghị Philip ya na ugbu a, ị na-arụ ọrụ na ị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-aga-chebere n'okwukwe. Ọ dịghị ihe dị na. Kama nke ahụ, ọ na-ekwu na eunuch wee ụzọ ya aṅụrị ọṅụ.
Nzọpụta site okwukwe na Jizọs
Ọ dị mkpa ka na-ekwu na ọ ga-now-azọpụta ma ọ bụrụ na ha na-spayed ma ọ bụ ma ọ bụrụ na onye na-adịghị neutered, ma ha na-azoputa n'ihi na ha na-anabata Jizọs dị ka Onyenwe, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ha na-neutered ma ọ bụ.
Ya mere mmadụ niile, onye ọ bụla na ị bụ, ị nwere ike mgbe ahụ na-anabata Jizọs na-azọpụta. Ọ bụ ezie na ọ na-neutered ma ọ bụ Genital n'ịwa ahụ.
Ndị ọzọ okwu: Ọbụna ndị na-spayed ma ọ bụ könsoperad-aga eluigwe ma ọ bụrụ na o kwetara na Jizọs dị ka Onyenwe anyị.